बैंकिङ क्षेत्रको कोर्स फेरिदै थियो, तर राष्ट्र बैंक पछि हट्यो-अजय मिश्र
बैंकिङ क्षेत्रमा काम थालेको थोरै वर्षमा धेरै प्रकारको अनुभव समाल्नु भएको छ बैंकर्स अजय मिश्रले । टेलिभिजनको जागिर छोडेर माछापुच्छ्रे बैंकमा पब्लिक रिलेशन म्यानेजर बन्नु भएका मिश्रले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छोटो अवधिमा नै ५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरिसक्नुभयो । प्रुडेन्सियल फाइनान्सको सीईओ, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ, जनता बैंक नेपालको डेपुटी सीईओ हुँदै उहाँ हाल युनाईटेड फाइनान्सको सीईओ बन्नु भएको छ । उहाँले नेतृत्व समालेको तीन महिनामा नै फाइनान्सको नाफा ११४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । प्रष्ट वक्ता तथा मोटिभेटर मिश्रसँग मौद्रिक नीतिको प्रभाव र युनाईटेड फाइनान्सको भविष्यबारे कुरा गरेका छौं ।
मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंककाे नीतिलाई कसरी लिनु भएकाे छ ?
मर्जरको लागि मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहित गरेको छैन । मर्जरलाई अलिकति सहुलियत दिने नीति आएको छ । बैंकहरुले के खोजेका थिए भने करमा थप छुट हुन्छ कि, सीसीडी रेसियोमा केही सुविधा पाइन्छ कि, स्प्रेडदरमा अलि राम्रै सुविधा पाइन्छ कि । बैंकहरुले आशा गरेको जस्तो सुविधा आएका थिए भने मर्जरमा जान सबै इच्छुक देखिएका थिए । सुविधा के आयो भने बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओलाई कुलिङ पिरेड नलाग्ने, स्प्रेडदरमा प्वाइन्ट वान प्रतिशत, त्यो पनि एक वर्षको लागि मात्र छुट दिने । मर्ज गर्ने भनेको लगानीकर्ताले हो । अहिलेको नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने सुविधा दिन सकेन ।
नयाँ सुविधाले मर्जरमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
नम्बर जस्ताको तस्तै रहन्छ । वाणिज्य बैंक २७ वटा नै रहने छन् । प्रतिस्पर्धामा आफूलाई गाह्रो महसुस गरिरहेका थोरै संख्यामा विकास बैंक र वित्त कम्पनी मर्जमा जालान् । बाध्यकारी नीति आएन भने सानोतिनो इन्सेन्टिभले ठूला बैंक मर्ज हुँदैनन् ।
2019-08-09 - 785 view(s) - bikashnews